ပိုပြီး ...စတိုင်အဒ်မင် အသုံးပြု. ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း
အကောင့်တစ်ခုအမည်အား (သင့် subdomain) ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်သင့် e-mail လိပ်စာရိုက်ထည့်ပါ။ သင့်ရဲ့အဓိကစီမံခန့်ခွဲသူ password ကိုသင့်အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ပေးပို့ပါလိမ့်မည်သတိပြုပါ။ သငျသညျကိုစပမ်သို့မဟုတ်ကြော်ငြာ get ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကို၏ပါလိမ့်မယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေထိုသို့အီးမေးလ်ကသင်၏ spam များကို folder ထဲမှာသင့်ရဲ့အဓိကစီမံခန့်ခွဲသူစကားဝှက်ကိုအတူရောက်ရှိကြောင်းဖြစ်ပျက်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ automated system ကိုဖိုရမ်များစက္ကန့်အတွင်းသင်၏အခမဲ့အဖိုရမ်တည်ထောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သင်ကဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တပြိုင်နက်အရာအားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ အခမဲ့ဖိုရမ်အစားသင့်ရဲ့ server ကိုတခုတခုအပေါ်မှာကိုယ်ပိုင်ဖိုရမ်များတပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ငွေအများကြီးမနှမြောပါလိမ့်မည်! သင် spam များကိုတိုက်ခိုက်မှု, ဆော့ဖ်ဝဲနောက်ဆုံးသတင်းများ, အသုံးပြုနိုင်စွမ်း, အသွားအလာကုန်ကျစရိတ်, programming ကိုသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်စိုးရိမ်ရပ်တန့်ရှိသည်။ သင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်အပြည့်အဝအာရုံစိုက်ကျနော်တို့ကြွင်းသောအရာကိုပြုမယ်! သင့်ရဲ့ဒေတာ၏လုံခြုံရေးကိုအရန်အရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာများသြစတြီးယားမှာတည်ရှိပါတယ်နှင့်အရှင်တင်းကျပ်သော privacy ကိုမူဝါဒဘာသာရပ်ဖြစ်ကြ၏ဒါကြောင့်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်သင့်ရဲ့ဖိုရမ်ချက်ချင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်အဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ဖိုရမ်သွားကြဖို့အဆင်သင့်နှင့်အလွယ်ကူပြီးစိတ်ကြိုက်လျှောက်လွှာအပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Account Name ကို [a-z နှင့် 0-9]: .webboard.org
ကျွန်ုပ်တို့၏ automated system ကိုဖိုရမ်များစက္ကန့်အတွင်းသင်၏အခမဲ့အဖိုရမ်တည်ထောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သင်ကဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တပြိုင်နက်အရာအားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ အခမဲ့ဖိုရမ်အစားသင့်ရဲ့ server ကိုတခုတခုအပေါ်မှာကိုယ်ပိုင်ဖိုရမ်များတပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ငွေအများကြီးမနှမြောပါလိမ့်မည်! သင် spam များကိုတိုက်ခိုက်မှု, ဆော့ဖ်ဝဲနောက်ဆုံးသတင်းများ, အသုံးပြုနိုင်စွမ်း, အသွားအလာကုန်ကျစရိတ်, programming ကိုသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်စိုးရိမ်ရပ်တန့်ရှိသည်။ သင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်အပြည့်အဝအာရုံစိုက်ကျနော်တို့ကြွင်းသောအရာကိုပြုမယ်! သင့်ရဲ့ဒေတာ၏လုံခြုံရေးကိုအရန်အရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာများသြစတြီးယားမှာတည်ရှိပါတယ်နှင့်အရှင်တင်းကျပ်သော privacy ကိုမူဝါဒဘာသာရပ်ဖြစ်ကြ၏ဒါကြောင့်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်သင့်ရဲ့ဖိုရမ်ချက်ချင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်အဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ဖိုရမ်သွားကြဖို့အဆင်သင့်နှင့်အလွယ်ကူပြီးစိတ်ကြိုက်လျှောက်လွှာအပြီးဖြစ်ပါတယ်။ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခွအေနမြေား Imprint ထံမှသက်ဆိုင်ပါသည်။